ပြည်တော်နိဗ္ဗာန်ဦးမဂ္ဂံပြည်တော်ဦးက မဂ်ရှစ်တန်ရွှေပြည်နိဗ္ဗာန်ဆိုက်ရောက်ရန်ပြည်တော်ဦးတဲ့ မဂ်လမ်းမှန်ရွှေပြည်တော်နိဗ္ဗာန်နန်းကိုလမှန်းဆမျှော်မြင်ဦးအစ မဂ်ရှစ်အင်ပြည်တော်ဦးမဂ်လမ်းစဉ်ကိုရွှေဘုန်းရှင် တွင်တွင်ပွားကြပါစို့လေး...။ သီလ (၂) ~ pyidawoo
2:27 PM Pyidawoo No comments
မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ. သာသနာတော်မြတ်ကြီးကို အနှစ်ချုပ်ပြောပြပါဆိုရင် သီလ သမာဓိ ပညာ သိက္ခာသုံးပါးကို ပြောကြပါတယ်။ တခြားဘာသာတွေကို အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင် သီလပိုင်းလောက်ကိုပဲ ပြည်စုံ တိကျမှု မရှိတဲ့ ဘာသာတွေရှိပါတယ်။ သမာဓိပိုင်းနဲ. စစ်ကြည့်ရင် ဗြဟ္မဏဟိန္ဒူဘာသာတစ်ခုပဲ အထိုက်အလျောက်ရှိတယ်လို. ဆိုနိူင်ပါတယ်။ မဂ်ပညာ ဖိုလ်ပညာနဲ. ချိန်ကြည့်ရင် ဗုဒ္ဓဘာသာကလွဲလို. ဘယ်ဘာသာမှာမှ မရှိတာကို တွေ.ရပါတယ်။ ဘုရားရှင်ရဲ. သာသနာတော်မြတ်ကြီးကတော့ သီလအစ သမာဓိအလယ် ပညာအဆုံး ကောင်းခြင်းသုံးပါးနဲ. ပြည့်စုံတဲ့ အားကိုးရာ အစစ် အဆုံးအမဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးမှာ သိရတဲ့ သီလနဲ. ပတ်သက်လို. “ကိုယ်နဲ.လုပ် နှုတ်နဲ.ပြောသမျှ သီလနယ်ထဲမှာ အကျုံးဝင်တယ် ” ဆိုတဲ့ ပြည့်စုံရှင်းလင်းတိကျတဲ့ သင်ကြားချက် မျုိးကို ဗုဒ္ဓဘာသာမှ တစ်ပါး အခြား ဘယ်ဘာသာမျုိုးမှာမှ တွေ.ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ ပြရရင် တစ်ချို.သော ဘာသာတရားရဲ. သင်ကြားချက်မှာ လူသတ်တာ မကောင်းဘူး အပြစ်ရှိတယ်လို. ယူဆ သင်ကြားပေမယ့် လူမဟုတ်တဲ့ အခြားသတ္တဝါ တစ်မျိုးမျိုးကို သတ်တာကို တော့ ဘုရားသခင် က လူသားရဲ. အစားအစာအနေနဲ. ဖန်ဆင်းပေးထားတာဖြစ်လို. အပြစ်မရှိဘူး လို. ယုံကြည်ကြတာ မျိုးပေါ့။ သတ္တလောက သြကာသလောက သင်္ခါရလောက ဆိုတဲ့ လောက သုံးပါး ကံနဲ. သံသရာ ဆိုတဲ့ မျက်စိတစ်ဆုံး သဘောတရားတွေကနေ နားဝေးတဲ့ မျက်တောင်မွှေး တစ်ထောက်စာ အမှန်တရားတွေလို. ဆိုရမလားပဲ။ ဘာသာတရားတိုင်းမှာ ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ. ပတ်သက်တဲ့ သင်ကြားချက်တွေရှိတာ အမှန်ပါပဲ။ ကောင်းမွန်မှန်ကန်ပြည့်စုံမှု ရှိမရှိဆိုတာကတော့ ဆန်းစစ်စရာ အကောင်းဆုံးအချက်ဖြစ်ပြီး ကွားခြားချက် ရှိတယ်ဆိုရင် အဲဒီ သင်ကြားချက်တွေကို စတင်ခဲ့ သူတွေရဲ. အဆင့်အတန်း အားလျော်စွာ ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။
လုပ်သမျှ ပြောသမျှ သူတစ်ပါးကို မထိပါးအောင် သူတစ်ပါး ချမ်းသာအောင် လုပ်တတ် ပြောတတ်တဲ့ အလေ့အထဟာ ကောင်းလား မကောင်းလား မေးရင် ဘယ်ဘာသာဝင်မဆို ကောင်းတယ်လို.ဘဲ ဖြေကြမှာပါ။ သို.သော် ဗုဒ္ဓဘာသာမှတစ်ပါး အခြား ဘာသာများကို မေးကြည့်ပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ရှင်တစ်ပါး ရဟန်းတစ်ပါးသည် ကိုယ်နှင့် နှုတ်ကို ကောင်းစွာ စောင့်စည်း၏။ ငါးပါး ရှစ်ပါး ဆယ်ပါးစသည် အလီလီသော သီလကို ကောင်းစွာစောက်ရှောက် ထိန်းသိမ်း နေထိုင်၏။ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်၏။ မိမိ၏ လုပ်ကိုင် ပြောဆိုမှုကြောင့် တစ်ပါးသူ မထိခိုက်မနစ်နာစေ။ သို.သော် သင်တို.၏ ဆိုင်ရာ မဟာဗြဟ္မာ မဟတ္တမံ ထာဝရဘုရား အလ္လာအရှင် စသည် ဖန်ဆင်းရှင်ကို ယုံလည်းမယုံ ကိုးလည်း မကိုးကွယ်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ် သေလွန်လျှင် Go to the Heaven? လား။ Go to the Hell?လား မေးကြည့်ပါ။ ဘယ်လိုဖြေမယ် ထင်ပါသလဲ။ ဒီမေးခွန်းရဲ. အဖြေကိုထောက်ဆပြီး ဘာသာတရားတွေရဲ. အဆင့် အတန်းနဲ. အားကိုးထိုက် မထိုက်ဆိုတာတွေကလည်း အသိတရားမြင့်မားသူတွေ အတွက် ချိန်ဆ စရာ အချက်အလက် ဖြစ်သင့်တာပါပဲ။
တရားပွဲ အပြီး ဂျယ်ဂျူး ခရီး
ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် ဖူဆန်းတရားပွဲ ဓါတ်ပုံများ
မြန်မာဖောင့် ဒေါင်းလုဒ် အယ်လ်ဖာဇော်ဂျီဆိုက်
ကိုရီးယား သာသနာပြု (၂)
အလှူတော် မင်္ဂလာ ဖိတ်ကြားလွှာ
ဖူဆန်း ဝိပဿနာ သင်တန်း
ကိုရီးယား သာသနာပြု (၁)
... ကံ "အကျိုးကိုကြည့် အကြောင်းသိရမယ် အကြောင်းကြ...
စာရိတ္တ နှင့် ဝါရိတ္တ
ဝါဆို သင်္ကန်း အလှူတော် မင်္ဂလာ
တတိယ အကြိမ် တရားပွဲ (ဖူဆန်)